Shiinaha: Markuu doobku waayo Adduun uu ku guursado | HimiloNetwork
Shiinaha: Markuu doobku waayo Adduun uu ku guursado
Posted by: Zakariya in Wararka January 11, 2017	0 264 Views
Beijing (Himilonews) – Tira-yarida dhedigta ah ee ku nool Shiinaha oo ay sababtay siyaasadda Hal Dhal ee dalkaas muddaba sharciga ka ah ayaa sababtay sara u kac inuu ku yimaado Gabaatiga ama Yaradka laga bixiyo gabdhaha – taas oo dhibaato ku keentay da’yarta ku nool miyiga fog ee Shiinaha.
Kororka ku yimid tirashada wiilasha iyo liica ku dhacay gabdhaha oo aad uga hooseeya kuwo wiilasha ku nool xaafaddiiba, waxay laba jeerba dhibaato ku aheyd Shiinaha. Markii hore, si loo helo da’yar wiilal ah oo xoojiya dhaqaalaha iyo warshadaha dalkaas, helidda lab waxay ahayd mid laga jecel yahay tan dhedig. Tani waxaa sii durjinayay siyaasadda Hal Dhal oo mar haddii qoysku hal cunug dhalaan ay adkeyd inay labeeyaan. Caadiyanna cunugga kaliya ee waalidku jecleystay inuu hantiyo wuxuu ahaa lab.
Isbiirsiga lab-doorsiga iyo siyaasadda Hal Dhal ayaa maanta keentay in gabdhahu aad uga yaraadaan wiilasha. Taas oo keentay in koror uu ku yimaado heerka guursi ee gabdhaha Shiinaha. Tusaale ahaan, 100-kii gabdhood ee ku nool xaafad, waxaa heeganka usoo gali kara 130 wiilal ah.
Si hadaba wiilashu gacalkooda guri ula hoydaan, waxaa ku horgudban marista raran kulul iyo ragaadyo badan.
Kahor xittaa guurka, saaxiib yeelashadu aalaba ma ahan mid ku dhisan gacaltooyo. Dal badi dadkiisu nolosha ay ku cabiraan hal-beegga hantida iyo sarreynta, waa iska caadi in gabadhu ninka lacagta badan ku dhiiba la socodkeeda ay doorato.
Halka meelaha qaar, dumar sababo dhowr ah ula sinnaadeen tiro ahaan ragga, hadana wali doonista ah in ninka Shiineeska ahi guursado gabar Shiinees ahi wali ma ahan sheeko fudud.
Qofku wuxuu aalaba amaah kasoo qaataa bangiyada ama waxay ku qaadataa inuu toban sano ku dhawaad ku abuuro hantida ama iskaga soo mago amaahda. Taas waxay keensatay in guurkuba uu noqday buurta ugu dheer nolosha ee lagu diihaalo koristeeda. Isku daygooduse ma ahan mid yar.
Dalalka indha-yarta ah ee ku dhegan Shiinaha ayaa dhacda in gabdho laga soo afduubay jujuub lagu keeno gudaha Shiinaha si nimanka qadyaanka ka jooga lamaane ay guursadaan ay ugu dhaxaan. In kasta oo tani marar ay keensato gaboodfal xarig iyo eedsiin muta, hadana doonista ah helidda gabar u dhaxda ragga qaar ee da’da ku gaaray doobabnimada wali waa sideeda.
Albaabada kale ee furan wada noolaanshaha guurku u egna waa doorasho kale.
Badi waxay lab iyo dhedigtuba nolosha ku dhameystaan guurka ku dhisan – Kaalay oo ila joog – ama wax afka qalaad lagu yiraahdo Come We Stay Marriage kaas oo xittaa natiijo ka noqday loolan laga yaabo inay ninkani ama gabadhai lacag badan uga soo baxday xaqiijintiisa.
Si kastaba, da’yarta ku nool miyiga fog ee Shiinaha kuwaas oo aan awoodin inay lacag badan ku bixiyaan Gabaati ama Yaradka ama inay helaan adduun kale oo ay ku maaweeliyaan gabdhaha ay jecel yihiin ayaa eersanaya sababtii waalidkooda ku qaaday inay kaliya iyaga un dhalashadooda doorbideen oo ay uga dheeraadeen inay gabdhana dhalaan.
Previous: Nin lagu xukumay inuu sabaayad u iibiyo boolis oo uu aflagaadeeyey
Next: Markay Lo’du gasho booska Fardaha
Maalinta Caalamiga Bedqabka Cunnada
Maqaal – Dalmarayaal u safra sidii dal-xiisayaal kase duwan!
GORGOR Weeraray Musharaxa DONALD TRUMP